/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Sibutramine hydrochloride powder
4.67 kupererwa ne 5 maererano ne 6 kasitoma ratings
Category: Fat Kurasikirwa poda Tags: Fat Kurasikirwa poda, meridia hcl powder, meridia powder, Sibutramine hcl powder, Sibutramine hydrochloride powder, Sibutramine powder
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hweSibutramine hydrochloride powder (84485-00-7), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Sibutramine hydrochloride (meridia hcl) powder video
Color: Grey kana chena crystalline Powder
Raeri meridia hcl powder Chiyeuchidzo chinokosha:
1.AASraw inopa sibutramine pfumbi yakasviba, iyo inogona't inowanikwa nevakawanda nzira dzakajairika.
2.AASraw inopa mapeji akawandisa uye nhungamiro yekugadzirwa kwekofi shoma, tei, jamu, jisi, nezvimwewo.
Chii chinonzi sibutramine HCL powder?
Sibutramine HCL (CAS 84485-00-7), inowanzonzi Sibutramine, iyo mishonga inobatsira nekurema-kurasikirwa nekuchinja maurotransmitter mukati meuropi. Sibutramine HCL powder, iyo yakagadzirwa naSibutramine hydrochloride, rudzi rweWhite powder, akawanda steroids michina yekutengesa kazhinji inotenga kuchena kwakakwana Sibutramine hydrochloride powder online, inoita kuti ive marudzi ose emagetsi akapedza Sibutramine hydrochloride.
Sibutramine inoshanda nekuwedzera Serotonin uye Norepinephrine mazinga muuropi, inounza zvirwere zvayo zvinoshandiswa nekudzivisa norepinephrine (NE), serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), uye zvishoma, dopamine reuptake neuronal synapse. Nokuvhiringidza reuptake yevavotitransmitters, sibutramine inowedzera satiety nekudzivirira kudya, zvichiita kuti kuderedza kudya kwekudya, kuve nemigumisiro iyo inoderedza uremu.
Sibutramine HCL powder muyero
Sibutramine inowanzozotorwa 10-15mg nguva, kamwe kamwe zuva nezuva. Tevera mirayiridzo yechiremba wako.Ichiremba wako anogona dzimwe nguva kuchinja dose yako kuti ave nechokwadi chokuti iwe unowana zvakanakisisa zvigumisiro. Nhamba yacho inogona kuwedzerwa kusvika ku15mg nechiremba mushure mevhiki dzinoverengeka kuti iite zvinodiwa. Maitiro ekukwira ku60mg ave akadzidzwa. Ingozvitora zvakakodzera pasi pekutungamirirwa kwachiremba wako.
Paunotora sibutramine powder, tapota yeuka kuchengeta zvinhu zvinotevera:
Usaitora nemashizha emichero, akadai sai, kofi, zvinwiwa. Sibutramine HCLis rudzi rwezvinhu zve acid. Migumisiro yekudzivisa kudya kudya kunoderedzwa apo kusanganiswa nemashizha emiti
Usafanirwa kutora kwenguva yakareba kupfuura makore 2.
Ndapota kazhinji kazhinji kuwedzerwa ropa uye kupisa.
Dzivisa kunwa doro uchibata sibutramine.
Dzivisa kuora uye kukonzera kana mishonga yemishonga.
Usatora chero mimwe mitemo kana kupfuura-the-weight-kurasikirwa michina kunze kwezano rechiremba wako.
▲Cherechedza:Nzira yekutora sei mibairo yakawanda? Unogona kuisanganisa mangwanani mangwanani zvichienderana nemaminitsi e15 vasati vadya, inwa mvura yakawanda, iwe unofanirwa kuva mukana wekuona zvikamu mukati mevhiki yekutanga yekushandiswa.
Kunyangwe mishonga yakanakisisa, yose ine migumisiro, saka sibutramine, zvimwe zvinowanzovhiringidza zvinosanganisira:
♦ muromo wakaoma uye nehuro
• kushushikana, kudengenyeka, kusagadzikana, kushungurudzika, kuzvidya mwoyo
• Kutya kana kutsamwa
♦ Kusuruvara kana kurutsa
♦ kuchinja mumararamiro (chirwere kana kuvimbiswa)
• kunyanya kupfugama
Mamwe matambudziko makuru anosanganisira:
♦ tachycardia (kukurumidza kwemwoyo)
♦ Kuwedzera kwehutano (kuwedzerwa kweropa)
♦ maonero asina kunaka
♦ Kutsiva kana kupera
♦ kurwadziwa kwepfupa kana kusagadzikana
♦ kufema kufema
♦ Mhembera kurira.
Izvi hazvina kusanganisira zvose zvinosvibisa, ndapota chengeta zvose paunosarudza kuitora.
Kana uine chero ipi zvayo yemigumisiro iyi, unofanira kuzivisa chiremba wako pakarepo.
Kushandiswa kweSibutramine HCL powder
Sibutramine inhengo yakagadzirirwa mumuromo yekurapa kuneta. Kune imwe nzira inowanzoshandiswa yekushandisa nzira yekushandisa sibutramine HCL powder. Kambani yakagadziriswa inokurudzira sechibvumirano:
(1)Tora sibutramine HCL powder zvakananga:
Sezvo sibutramine isiri mishonga inodhaka, kushandiswa nekukurumidzira kunotevera kushandiswa kwemuromo. Absolute bioavailability hazvizivikanwi, asi zvishoma nezvishoma 77% yemutengo mumwe wemuromo wa sibutramine inowanikwa. Saka tora sibutramine HCL powder zvakananga zvakare kubatsira mukurasikirwa nero. Nhamba ye sibutramine inopesana nepamusoro pe 20-30mg. Uye nhamba ye sibutramine zvakare inogona kugadziriswa maererano nemamiriro emuviri. Asi maererano nehutano hwekutsvaga kwekambani yeAASraw, zviri nani kuve nechokwadi kuti usatora sibutramine HCL yakawanda yeupfu kupfuura 120mg pazuva.
(2)Itai kuti uremure kurasikirwa capsule:
Nzira yakakurumbira yekushandisa sibutramine HCL yakawanda pfumbi ndeyoyo inoita sibutramine HCL yakawanda mairi mu kuora kurasikirwa capsule. Izvi zviri nyore kwazvo. Uye iwe unogona kuwedzera zvimwe zvinokonzera ne sibutramine HCL powder pamwechete, zvakadai se lactose, glucose, starch ... nezvimwewo.
Kuita kuti hurumende yeAASraw igone kushanda kwemhepo, inyanzvi inokurudzira kuti kushandiswa kwemhepo kuvharidza midziyo yekuzadzisa kuti mutevedzo wekodhi yemapule imwe neimwe inosvika pakuwana huwandu hwakatarwa, uye kushandiswa kwemichina yekubatanidza midziyo kuti ave nechokwadi chokuti mishonga nezvimwe zvizere zvizere kusanganiswa.
(3)Ita mukofi inotapira:
Sibutramine HCL yakagadzirwa nguva dzose inosanganiswa nezvimwe zvinoshandiswa (kufanana newaini yekasiki, rose powder, lactose, dietary fiber ...) kuita saga yakaoma.
Fungidzira zuva rakakwana: iwe uri pamahombekombe, muHawaii somuenzaniso, mangwanani akanaka, uye iwe unoenda kune hovha yekutengesa uye unofara muchengeti weHawaii anokushandira kapu inopisa yekofi. Inonzwika zvakanaka. Iye zvino, unoziva kuti uri kudya kudya kwakanaka kwazvo uye mahombekombe akanaka, uye pizzas ... asi usati waparadzwa iri zororo, wakanzwa kuti kofi uri kunwa mangwanani oga oga unoita kuti ureruke. Zvino ndiudze, hazvishamisi? Iwe unoda kutenga iyi kofi uye kunwa iyo zuva nezuva kwehupenyu hwako hwose.
Asi pane mumwe mubvunzo wekushandisa sibutramine HCL powder kuti uite kofi inopera. ASraw akawana kuti, vamwe vanokonzera kofi vanogadzira kofi vanonyunyuta kuti vanotenga bhadha sibutramine HCL yakawanda zvinyorwa kubva kune dzimwe sibutramine HCL powder mupiki kana kutenga sibutramine HCL raw material online. Vanotenga sibutramine HCL yakawanda yemuchina uye vanoshandiswa kuita sopfuki yekofi kana kuchenesa, asi hapana chakaipa. Sei sibutramine HCL poda pasina chinhu?
KUDZIDZA kuedza kuedza uye kuwana mugumisiro. Chokutanga, iwe unotenga futramine HCL yakawanda, iyo isu tose tinoziva kuti, kune vakawanda sibutramine HCL powder mupiki pamusika, asi kana iwe usingazivi nzira yekuziva sei sibutramine HCL michina yakanaka kana kuti kwete, iyo Zviri nyore kutenga bhata sibutramine powder online. Izvo zvakaoma kuwana yakakwirira yepamusoro sibutramine HCL yakawanda poda pamusika.
Kana yako sibutramine HCL powder isiri nhema, inofanira kunge iri chikonzero nei nei sibutramine HCL poda pasina chinhu. Pamusika, kazhinji kuonekwa sibutramine is hydrochloride salt type, asi kahawa kana teyi is alkaline, pamwe ne sibutramine hydrochloride kusanganiswa kushandiswa, acid-base neutralization, kuderedza kana kutungamirira kuchigadzirwa chekurehwa kwemaitiro kusagadzikana. Saka kana iwe uchida kuita pfupa rinorema kurasikirwa kahawa kana tei ne sibutramine, yako sibutramine HCL powder suppiler anofanira kuziva kuti angagadzirisa sei sibutramine maererano nehafi yako uye tei.
▲Cherechedza:Tinofanira kukuyeuchidza vaiti vekutema kurasikirwa (zvinodya tiyi, kofi yekurasikirwa, jelly yezvokudya, nezvimwewo) izvo vanogadzirisa vanofanira kuterera kune zvinotevera:
Chengetedza chiyero cheasidhi uye alkali chechigadzirwa, kuitira kudzivirira munyu kuti usashandurwe kuva munyu muchitsiko cheasidhi, zvichiita kuti chisina kukodzera chigadzirwa;
Sibutramine haigoni kusanganiswa nemashizha emichero, zvinyorwa zvinowanzosimba zvakasimba alkaline, asi sibutramine yakaoma kwazvo, uye ichavawo mushure mushure mekubatanidza.
Kana iwe usingawedzere mamwe mapepa nenzira yakakodzera, iwe uchava nemigumisiro yakajeka: kuvhara, kusvina chiso chako, mweya wakaipa, nezvimwewo.
Inokurudzira pakuita Sibutramine HCL powder (Kuita iwe pachako)
Nezve sibutramine hydrochloride Vashandi vanoshandisa mhinduro dzemhinduro (Recipe ndeyokutaura chete):
(1) Zvishandiso zvedu sibhuramramine hydrochloride, tsvina 99%, chikwata chemishonga.
Nzira inowanzoshandiswa mumusika:
Mikoko yakatapira mazai, mashizha ejasus, pfupa refivha uye zvimwe zvinyorwa zvitsva, zvinyorwa zvakadai semarikine zvinhu, pamwe nesibutramine hydrochloride kushandiswa kusanganiswa, acid-base neutralization, kuderedza kana kutungamirira kuchibereko chekurasikirwa kwemaitiro kusagadzikana.
b. Kushandisa zvakakwana sibutramine hydrochloride, rimwe nerimwe rakapetwa 20-30mg, zuva rega rega harisi kupfuura 200mg.
c. Kubva kumaprozimisi, zvinokurudzirwa kuti kushandiswa kwemasvini ewaini uye sibutramine hydrochloride yakavhenganiswa capsules, yakakurudzirwa muyero 30mg.
(3) Zvinokurudzira pamusoro pekugadzirwa kwemidziyo:
Kushandiswa kwemweya kuwedzera kwekugadzirisa midziyo yekuvimbisa kuti mutevedzo wekodhi yemumwe nomumwe capsule kuti awane huwandu hwakananga.
b. Kushandiswa kwemichina yekugadzirisa midziyo yekuvimbisa kuti mishonga nezvimwe zvinhu zvakanyatsokanganiswa.
Vatengi vanokurudzirwa kushandisa zvishandiso zvedu zvakananga mu laboratory yechitatu-party kana kuti Annex Annex University makemikari ekuongorora, nemushumo wekuongorora unyorera pane kambani yeAASraw, inogona kubhadharwa kuongororwa mari uye kuenzanisa mari.
III. Raw Sibramramine hcl powder HNMR
Sibutramine: Zvinhu zviviri unofanira kuzviziva Sibutramine (Meridia) yekurapa kuneta Kwatenga kutenga Sibutramine inobatsira (Meridia) Sibutramine: Mabasa, Dosage uye Side effect
Sibutramine: Inoshanda Zvakadini? 5ways kuziva Sibutramine Sibutramine mutengo uye kutenga sei sibutramine powder
Mamwe tsanangudzo pamusoro pezvinhu zvakakosha zvemiti, gamuchirai kuti munyore pano.
6 anodzokorora nokuti Sibutramine hydrochloride powder
Ndakatenga zvose sibutramine uye orlistat, chiitiko cheSibutramine chinoratidzira zviri nani.ndizvo chaizvoizvo kunondibatsira kuti ndiwedzere pamusika webhizimisi rangu.
Iyo pfupa yeSibutramine inonakidza zvishoma zvinorwadza, inoshanda zvakanaka, ndicho chikonzero ndinorumbidza uye ndinyorera pasi kuongorora. Kwete nechokwadi nezveSibutramine mero, saka yakatsvaga musangano reSibutramine. Ndinowedzera 20mg Sibutramine pfumbi yakasviba mukofi, kunwa makapu 2 pazuva, uyewo nekushanda 3 dzimwe nguva pavhiki .. Ndarasikirwa ne10lb. Ida mukoko weSibutramine muAAS.
Ndanga ndashandisa Sibutramine powder kwemwedzi unopfuura ikozvino. Sibutramine chiitiko chinoratidza, ndakarashika 3 pounds !!! Handina kuita maitiro.
Ini ndiri mafuta kurasikirwa nemugovera.2 mwedzi wapfuura ndakatenga Sibutramine pano.
Mushure mokunge ndabvunzisisa zvimwe zvakadai saSibutramine, maitiro ekuita, Sibutramine mero, ini ndakasarudza. Uye Sibutramine Kurasikirwa kwehupfumi zvinoratidza kuti ndakaita chisarudzo chakanaka.
Mushure mekuedzwa, ndakaiita muSibutramine kudya mapiritsi uye ndinotengesa kune vatengi vangu.
Kuongorora kwandakawana kubva kune vatengi vangu ndeyekuti Sibutramine yakavabatsira kuremerwa kwekurema.Iyo inoshanda zvakanaka. Zvino inova yedu yokutengesa mafuta ekurasikirwa kwezvinhu.
Dr. Patrick Young on Tenga kuchena zvakanyanya Tadalafil powder online: Zvinhu zvose unofanira kufanira !!!